Tun Tun's Photo Diary: How to go Dee Doke Waterfall, Mandalay (ဒီးဒုတ်ေ၇တံခွန်/ေ၇ပြာစမ်း)
မြန်မာဖောင့် မရှိတဲ့ သူတွေ အတွက် အင်္ဂလိပ်လို နည်းနည်းေ၇းပါမယ်။
Dee Doke waterfall is located at the outskirts of Mandalay city. It takes about 1 hours driving distance (Car/motor) from Mandalay city. From Mandalay to Pyin Oo Lwin highway, near Ohn Chaw town use the road which leads to Ye Ywar Hydro Power Dam. There is only one highway to go there. Keep driving until you see the Sign "To Dee Doke Waterfall".
ပြီးခဲ့တဲ့၂နှစ်လောက်က စပြီး ဖေ့ဘုတ်ထဲ မှာ လူတွေ ဒီးဒုတ်ေ၇တံခွန် သွားနေတဲ့ ပုံတွေ မြင်နေရတော့ ကိုယ်တိုင်လဲ သွားချင်မိတယ်။ ဒါပေမယ့်လဲ မြန်မာပြည်ပြန်ေ၇ာက်တိုင်း တခြား အထင်ကရ နေ၇ာ တွေပဲ သွားဖြစ်တော့ ဒီးဒုတ်ကို မေ၇ာက်ဖြစ်ဘူး။ ၂၀၁၃ ဒီဇင်ဘာ မှပဲေ၇ာက်ဖြစ်တယ်။
ေ၇ာက်ဖူးတဲ့သူတွေက ပြောပါတယ်။ မန္တလေးကနေသွားရင် ပြင်ဦးလွင်သွားတဲ့ လမ်းအတိုင်းသွား။ အုန်းချောမြို.နားေ၇ာက်၇င် AAA ဘိလပ်မြေသွားတဲ့ လမ်းအတိုင်းသွား။ မှားစ၇ာ အကြောင်းမရှိဘူးတဲ့။ အုန်းချောမြို.ကျော်တာနဲ. AAA ဘိလပ်မြေ စက်ရုံကို တွေ.ပါတယ်။ အဲဒီကနေ ပုံထဲက Highway လမ်းအတိုင်း တည့်တည်.မောင်းသွား။ ဒီးဒုတ်ေ၇တံခွန်သို. ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်မြင်တဲ့ အထိပေါ့။ ဆိုင်းဘုတ် မမြင်ပဲ ကျော်သွားရင်တော့ ရဲရွာေ၇အားလျှပ်စစ်စက်ရုံေ၇ာက်မယ်လို.ပြောတာပဲ။
အိမ်ကနေ မနက် ၁၀ နာ၇ီ လောက် ထွက်သွားတာ။ ၂နာ၇ီလောက်ဆိုင်ကယ်မောင်းပြီးမှေ၇ာက်တယ်။ တကယ် တမ်း မနားပဲ မောင်း၇င် တော့ ၁နာ၇ီလောက်နဲ.ေ၇ာက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ၂ နာ၇ီကြာ၇တဲ့ အကြောင်း အ၇င်းကတော့ အောက်က ပုံတွေ ကို ကြည့်ရင် သိသာပါတယ်။ လမ်းတစ်လျောက် ၇ူခင်းလှတာ တွေ. ၇င် ဓါတ်ပုံ ဆင်းဆင်း လိုက်နေလို.ပါ။ အဲလိုမှ မဟုတ်၇င် ဒီးဒုတ်ေ၇တံခွန် ပုံပဲ ရပြီး ပြန်လာမှာလေ။ အခုလို နားလိုက် မောင်းလိုက် လုပ်တော့ ဓါတ်ပုံတွေ ပြစ၇ာ အများကြီး ဖြစ်သွားတာပေါ့။
ဒီးဒုတ်သွားတဲ့ လမ်းကောင်းလား မကောင်းဘူးလား မေးတဲ့ သူတွေ အတွက် အခု ပုံမှာ ပြထားတဲ့ လမ်းကို ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ကြပါ။ လမ်းမကြီး ကချောမွတ် ဖြောင့် ဖြူး နေတာ။ ရှယ်လမ်းမကြီးပေါ့နော်။
AAA ဘိလပ်မြေစက်ရုံ ကျော်ပြီး ၁၅ မိနစ်လောက် မောင်းလိုက်ရင် အခု ပုံထဲကလို စမ်းချောင်းလေ တွေ.ပါလိမ့်မယ်။ ပုံမှန်ေ၇ှ.ပဲ တန်းတန်း ကြည့်ပြီး မောင်းတဲ့သူဆို တွေ.မှာ မဟုတ်ဘူး။ေ၇တွေက ကြည်ပြီး ပြာနေတာ။ အစက တော့ မသိဘူး။ နောက်မှ အဲ့ေ၇တွေက ဒီးဒုတ်ေ၇တံခွန် က စီးလာမှန်းသိတယ်။ ဒါနဲ.ပဲ ကျွန်တော် ဆိုင်ကယ် ခဏ၇ပ်ပြီး အဲဒီ စမ်းချောင်းဘက်ထဲ ကို ဆင်းပြီး သွားလေ့လာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အောက်ကပုံတွေကို ကြည့်ကြည့်ပါ။
Make sure you stop on your way. The scenery is amazing. This water flows from Dee Doke waterfall so it is very clean and bluish.
ေ၇တွေ က ကြည်ပြီး ပြာနေတာ။ ကချင်ပြည်က မေခ မလိခ မြစ်ဆုံ နဲ.တောင် သွားတူလိုက်သေးတယ်။
အဲဒီကျောက်ခဲလေးတွေ တောင် သဘောကျလို. ၃တုံးလောက်ကောက်ခဲ့သေးတယ်။ ချေးတွန်းဖို. စင်ကာပူ ထိသယ်လာတယ်။း)
အဲ့ဒီ စမ်းချောင်းနားက နေ တက်လာပြီး ဆိုင်ကယ်နည်းနည်းပြန်မောင်းလိုက်တော့ အဲ့ဒီ စမ်းချောင်းကို အပေါ်စီးက ပြန်မြင်ရပါတယ်။ လူတွေ ဟိုဘက်ကမ်းကို လှေနဲ. ကူးနေတာ တွေ.ခဲ့ရတယ်။ ရူခင်းတွေက အင်မတန် လှပါတယ်။ တကယ်လို ဒီ၇ူခင်းကို မမြင်ခဲ့ပဲ ဒီးဒုတ်ကို တန်းေ၇ာက်သွားရင် နှမြောစရာ သိပ်ကောင်းမှာပဲ လို. တွေးမိတယ်။
ဒီလိုနဲ. မေ၇ာက်သေးဘူးလား၊ မေ၇ာက်သေးဘူးလား နဲ. မောင်းလာလိုက်တာ။ နေကြာခင်း အကြီးကြီး ကို တွေ.ပြန်တယ်။ ဒါနဲ. ပဲ ဆိုင်ကယ် ခဏရပ်ပြီး နေကြာခင်းထဲ ၀င်လိုက်ပါသေးတယ်။ နေကြာပန်းတွေ အ၇မ်းကို လှပါတယ်။ တောင်တန်းတွေ ၊ တိမ်ပြာပြာ အောက်မှာ နေကြာပန်းတွေ ထိုးထိုးထောင်ထောင်မြင်ရတာ အင်မတန်မှ စိတ်ကြည်နူးဖို.ကောင်းပါတယ်။ ဘယ်သူမှ မ၇ှိတဲ့အတွက် ဓါတ်ပုံတွေ လဲ စိတ်ကြိုက် ရိုက်ဖြစ် ခဲ့တယ်။ ဆိုင်ကယ်တွေ ကားတွေ အဲနားက သာ ဖြတ်သွားကြတယ် ဘယ်သူမှ ကိုယ့်လို ဆင်းပြီး ဓါတ်ပုံ မရိုက်ကြဘူး။း)
Next stop, sunflower farm. I really like sunflower. They look beautiful under Gorgeous blue sky.
နေကြာခင်းထဲမှာ ဓါတ်ပုံ ၇ိုက်ပြီး အားရတော့ ဆိုင်ကယ်နားလဲေ၇ာက်ေ၇ာ။ ဆိုင်ကယ်မှာ ချိတ်ထားတဲ့ ပေါက်စီနဲ. ပေါင်မုန်.အထုပ် ခွေးတွေ ချည်သွားပြီး စားနေတာ တွေ.ခဲ့တယ်။ အဲဒီခွေးတွေ ဘယ်လောက်တောင် ငတ်နေလဲ မသိပါဘူး။ ဆိုင်ကယ်မောင်းတဲ့သူက ဒီးဒုတ်မှာ ထမင်းဆိုင်ရှိုတယ်ဆိုလို. သနားတာနဲ. အိတ်ထဲမှာ ပါတဲ့ မုန်.တွေ တောင် ထပ်ပြီး ကျွေးလိုက်ပါသေးတယ်။
Lunch at Dee Doke Waterfall.
ဒီးဒုတ်လဲေ၇ာက်ေ၇ာ နေ.လည့် ၁၂နာရီ ထိုးနေပါပြီ။ ဒါနဲ. ထမင်းဆိုင်မှာ ထမင်းဆီဆမ်း နဲ. လက်ဖက်သုတ်မှာ စားပါတယ်။ နှမ်းဖတ်ချဉ် က အရံဟင်း ချပေးတာပါ။ ဟင်းရည်နဲ. ငံပြာရည်ကြော်လဲ ချပေးပါတယ်။ ဈေးပေါတယ်။ေ၇သန်.ဗူးလဲ ၃၀၀ ပဲပေးရတယ်။
ကလေးတွေ ထမင်းစားနေတာ ၀င်နှောက်ယှက်ခဲ့သေးတယ်။ စားပြီးသောက်ပြီးေ၇တံခွန်ကိုေ၇ာက်ဖို. တောင်တက်ရပါပြီ။ ပင်ပန်းတယ် ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော့် အတွက် ကတော့ အရမ်း မပင်ပန်းဘူး။ ဓါတ်တော် ချိုင်.ေ၇တံခွန် နဲ. ယှဉ်ရင် ဒါက သိပ်မပြောပလောက်ပါဘူး။
Start hiking to the waterfall.
၁၀ မိနစ်လောက် လမ်းလျှောက်တက်လိုက်တာ။ အခုလို လှမ်းမြင်ရတယ်။ အဲမှာ ခဏ ဆင်းပြီး ဓါတ်ပုံ၇ိုက် လိုက်တယ်။ အောက်ဆုံး အဆင့်ေ၇တံခွန် ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
This is the bottom of the waterfall. The water is crystal clear and bluish.
အပေါ်က ရေတံခွန်က ပိုလှတယ်ဆိုတာနဲ. ခဏပဲ ကြည့်ပြီး အပေါ် ဆက်တက်သွားတယ်။ ဒီတခါတော့ တကယ် တက်ရပြီ။ နားလိုက် တက်လိုက်နဲ. နာရီဝက်လောက်နေမှ နောက်ေ၇တံခွန်ေ၇ာက်ပါတယ်။ တချို. ဆက်မတက်နိုင်တဲ့သူတွေ အထူးသဖြင့် အသက်ကြီး တဲ့သူတွေ က ဒီနေရာ ပဲ ကြည့်ပြီး လှည့်ပြန်ကျတယ်။
I still need to visit another waterfall. Keep moving.
The paradise is here. I need to descend to go there.
ေ၇ာက်ပါပြီ။ ဒါကတော့ ခုန အောက်မှာ တွေ.ခဲ့တဲ့ေ၇တံခွန် ထက်ပိုကြီးတဲ့ ရေတံခွန်ပါ။ အပေါ်က နေအောက်ကို ဆင်းတဲ့ လမ်းက နည်းနည်းတော့ ကြမ်းတယ်။ ပုံထဲက အတိုင်း ၀ါးတွေ နဲ. ဆောက်ထားတဲ့ လမ်းကနေ တွယ်ပြီးဆင်းရတာ။ ၀တဲ့သူဆိုရင် ကြိုးကျမလားပဲ။
လူတွေ ဘောကွင်းတွေငှားပြီးေ၇ကူးနေကျတာတွေ လို. ကိုယ်တိုင်တောင်ေ၇ကူးချင်စိတ်ပေါက်လာတယ်။ အစက ဆောင်းတွင်းမို. အေးတာနဲ.ေ၇ကူးဖြစ်မယ်မထင်လို. ဘောင်းဘီ အပိုယူမလာမိတာ အရမ်းကိုနောင်တရမိတယ်။ရေးမကူးရမဲ့အတူတော့ ရေတံခွန်တလျောက် ဓါတ်ပုံတွေ လျှောက်၇ိုက်တယ်။
ဒီတံတားလေး ကနေ တောက်လျှောက် အပေါ်ထိ တက်ချင်ရင် တက်လို.ရသေးတယ်။ တံတားလေးက သိပ်ပြီး ခိုင်တဲ့ ပုံ မပေါက်လို. ဆက်မတက်ပဲဒီနေရာ ကနေ ပြန်ဆင်းလာခဲ့တယ်။ လူပြုတ်ကျတာ ကိစ္စမရှိဘူး။ ကင်မ၇ာ ရေထဲကျမှာ ပိုစိုးရိမ်တယ်။း)
ကံကောင်းချင်တော့ ကျောပိုးအိတ်ထဲမှာ လို၇ာသုံးဖို.ထည့်ထားတဲ့ ပုဆိုးအစုတ်တထည်ပါလာတယ်။ အဲဒါနဲ.ပဲ ပုဆိုး ၀တ်ပြီးေ၇ဆင်းကူးပါတယ်။ သူများကတောင် စနေသေးတယ်။ ပုဆိုးကြီး နဲ.ေ၇ကူးတာေ၇သူမကြီးနဲ. တူလို.တဲ့။း)
Make sure you bring an extra short pant to swim here.
ေ၇ကူးတာ အားရတော့ အပေါ်ပြန်တက်ပြီး လာလမ်းအတိုင်း ပြန်ဆင်းတယ်။ လမ်းမှာ တွေ.တဲ့ ကလေး တွေကို ဓါတ်ပုံ၇ိုက်တယ်။ အအေးသောက် ခဏနားပြီး မန္တလေးဘက်ကို ပြန်မယ်။
အပြန်ကျတော့ ဘယ်မှ သဝေထိုး မနေတော့ဘူး။ဆိုင်ကယ်တောက်လျှောက်မောင်း ပြီးပြန်တယ်။ ဒါတောင် လမ်းပေါ်က တောင် ပုလေး တွေ တခုလောက် တက်မလားလို.။ေ၇ကူးထားတာ မောလို. မသွားနိုင်တော့ဘူး။
ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော် မန္တလေးကနေ မနက်၁၀နာ၇ီထွက်လာတာ။ နောက်တခါေ၇ာက်ဖြစ်မယ် ဆို၇င်တော့ မန္တလေးကနေ စောစောထွက် မယ်။ နေအရမ်းမပူရင် ဓါတ်ပုံ ၇ိုက်လို.ပိုကောင်းတယ်။ တောင်တွေ တက်ချင်ရင်လဲ အချိန်ပိုရတယ်။
အနှစ်ချူပ်အနေနဲ. မန္တလေး မှာ ဒီလို လှပတဲ့ နေရာ ရှိမယ်ဆိုတာ မထင်ထားမိဘူး။ ၇ှမ်းပြည်ဘက်ေ၇ာက်သွာသလို ခံစားရတယ်။ စင်ကာပူရုံးက လူတွေတောင် တောင်တန်းပုံတွေ ကြည့်ပြီး အဲဒါ နယူးဇီလန် လားလို.တောင် မေးနေသေးတယ်။ တခုစိတ်ပူမိတာက နောက်တဖြည်းဖြည်း သွားတဲ့သူများရင် အမိူက်တွေ၊ ပလက်စတစ်အိတ်တွေ များလာမယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေ ထိခိုက်ပြီး အခုလို ကြည်လင် သန်.ရှင်းနေတဲ့ ရေတံခွန်စမ်းချောင်းလေး အမိူက်တွေ နဲ. ပြည့်သွားမှာ စိုးရိမ်မိပါတယ်။
Bye Bye Dee Doke. Hope to see you again. !!!
at 2/05/2014 05:52:00 PM
Labels: Dee Doke, Flower, Food, Mandalay, Myanmar, Myanmar Food, Waterfall
Thank you so much Ko Tun Tun, I have never seen that beautiful water fall in burma.
Anonymous February 6, 2014 at 6:42 AM
ဟီး..ဟီး..ပုဆိုးနဲ့ ဆိုတော့ ရေသူထီး ပေါ့..
ကောင်းကင်အရောင်က တောက်ပပြီးတော့ ရေပြင်က အရမ်းကြည်လင်တယ်..
ဂျစ်တူး ( မုံရွာ ) March 7, 2014 at 2:36 AM
ပစ်ပစ် March 14, 2014 at 12:23 PM
Unknown October 17, 2014 at 3:33 AM
တကယ်ရောက်သွားရသလိုပါပဲ ..ကျေးဇူးပါ.. နောက်ထပ်လဲ တင်ပေးပါဦး...နော်...
Unknown December 29, 2015 at 3:33 AM
thanks u for your photos and information
Htan San Cave (ထမ်ဆမ်း လိူဏ်ဂူ)
Taungyi #1 (Lunch)
Pindaya Cave #5
Singapore Chingay Parade 2014
How to go Dee Doke Waterfall, Mandalay (ဒီးဒုတ်ေ၇...